‘भड्काववादको पछि नलागौं नेपालमा केपी ओलीको विकल्प छैन्’ – Panchakoshi Daily
‘भड्काववादको पछि नलागौं नेपालमा केपी ओलीको विकल्प छैन्’
पंचकाेशी संवाददाता । २०७७ पुष १८, शनिबार मा प्रकाशित
दैलेख कर्णाली प्रदेशकै दोस्रो बढी जनघनत्व भएको जिल्ला हो । दुई संघीय र चार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र रहेको दैलेखमा करीब तीन लाख जनसंख्या पुगेको अनुमान छ । दैलेखलाई नेकपाको गढको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ । दैलेखको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा पछिल्ला निर्वाचनमा कम्युनिष्टले नै लगातार निर्वाचन जित्दै आएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा कांग्रेस र नेकपाको कडा टक्कर हुँदै आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले नेकपा दुई चिरा हुँदा कांग्रेसलाई चिट्ठा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । नेकपाको बर्चस्व भएको दैलेखमा अहिले प्रष्ट रूपमा दुई खेमामा वडा तहसम्म कार्यकर्ता बाँडिएका छन् ।
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले यसै साता जिल्ला कमिटीको बैठक सम्पन्न गरेको छ । ११ वटा पालिका रहेको दैलेखमा सात वटा पालिकामा नेकपाले विजय प्राप्त गरेको थियो । तीमध्ये आठबिस नगरपालिका, नारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख ओली समूहमा लागेका छन् । ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष पनि ओली समूहमा नै रहेको ओली समुहका नेताहरुको दाबी छ । चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका, महावु गाउँपालिका र भगवतीमाई गाउँपालिकामा प्रचण्ड–नेपाल समूहका जनप्रतिनिधि छन् । यसरी हेर्दा जिल्ला कमिटीमा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहकै बढी सदस्य भएको देखिन्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दैलेखका अध्यक्ष रवीन्द्रराज शर्मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुन् । उनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समुहका नेता हुन् । हाल काठमाडौंमा रहेका अध्यक्ष शर्मासँग पत्रकार शेरबहादुर थापाले जिल्लाको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारः
एकदमै राम्रो छ । हामी अग्रगमनका पक्षधर हौं । जनता भन्दा ठूलो कोही छैन । जनताको मतको आधारमा हामी अहिले पनि एक नम्बरमा नै छौं । अझ भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रप्रेम, देशभक्तिका कारण हामी थप सबल हुन्छौं । हामी अन्य कोही पनि समूह या दल भन्दा कम छैनौं ।
अहिलेलाई केही समय बाँकी छ । केही समयपछि मात्रै हामी त्यो अभियान शुरू गर्छौँ । पहिले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं । कानूनी प्रक्रिया टुंग्याएर आधिकारिकता पाइसकेपछि हामी शुरू गछौँ । हरेक जनताका घरमा हामी पुग्छौं ।
उहाँहरूलाई हामीले किन कारबाही गर्ने ? उहाँहरू नयाँ पार्टी बनाएर अघि बढ्नुहुन्छ । आफैं हिंडिरहनुभएको छ । कुम्लो कुटुरो बोकिरहनुभएको छ । खाली ठाउँमा पछि हामी भरौंला नि । उहाँहरू आफैं जानुहुन्छ । असल, योग्य र क्षमतावान कामरेडलाई जिल्ला कमिटीमा ल्याउँछौं ।
अन्धाले देख्ने र बहिराले सुन्ने भने जस्तै त्यो कुरा हो । त्यो देखिएकै छ । अर्को महाधिवेशनमा अध्यक्ष लड्दिनँ, अर्को निर्वाचनमा दुई तिहाइ बनाइदिन्छु प्रधानमन्त्री तपाईंहरू हुनुहोस् । यसको पनि विधि छ, प्रक्रिया छ । अस्थिरता, गञ्जागोल नगर्नुहोस् भनेर बारम्बार जनताको बीचमा उहाँले भन्दै आउनुभएको थियो । केपी ओलीलाई कसरी पदको लोभी भन्ने ? साथीहरूलाई रहेछ । पार्टीको वैधानिकताको बारेमा निर्वाचन आयोगले फैसला गरेको छैन । उहाँहरूले तात्तातो जनताका बीचमा जानै पर्ने । त्यति पनि धैर्य छैन ? यस्ता आरोपको काम छैन । यस्ता आरोपको डटेर सामना गरिन्छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहँदा कर्णालीलाई के दिए ?
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा समृद्धिका कुरा, स्रोतसाधन बढी दिएका छन् । कर्णालीका तीन वटा राजमार्ग निर्माणमा जोड दिनु, अन्य प्रदेश भन्दा बढी बजेट कर्णालीका लागि पठाउनु, कार्यक्रमहरू पर्याप्त आउनु, यो के हो ? आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नु त प¥यो नि । मन्त्री पाउने नपाउने भन्दा पनि काम गर्न सक्नुपर्छ । मन्त्रीको रूपमा शक्ति बस्नेत थिए, राज्यमन्त्री पनि कर्णालीले पाएकै थियो । तल मुख्यमन्त्री छन् । कर्णालीले केही पाएन भन्ने कुरा होइन ।
नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व हो । त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूको प्रमुख दायित्व हो । यस्तो समयमा अनावश्यक गतिविधिमा लाग्नुहुँदैन । पार्टीको प्रथम अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको पुनर्गठन गरेर अध्यक्ष अघि बढ्नुभएको छ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया समातेर निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ । पार्टीभित्रका पूर्व प्रधानमन्त्रीले जहिल्यै कुरा नमानेपछि के हुन्छ अवस्था ? जो प्रधानमन्त्री भए पनि आफ्नैबाट निरन्तर हुने हो । असहयोगले सफल हुन सकिंदैन ।
सिद्धान्त र व्यवहारको बिचमा तालमेल ल्याउने मदन भण्डारीको ठुलो अडान थियो
घरबेटीलाई मात्र होइन, भाडामा बस्नेलाई पनि विद्युत महशुल छुट हुन्छ : ऊर्जामन्‍त्री